Ngwaọrụ Semalt nke Semalt
Semlọ ọrụ Semalt
Akụkọ ihe ịga nke ọma Semalt
Chọrọ ịnye ọkwa dị elu na Google? Semalt.net bụ ngwọta zuru oke maka azụmahịa gị. Ọ nwere ngwaọrụ kachasị ike iji nye gị ọkwa kachasị elu na Google. Saịtị bụ ọrụ enyi na enyi na ukwuu kensinammuo. N'otu echiche, ị nwere ihe niile ịchọrọ iji mezuo nke ọma.
A na - enweta ngwa ọrụ nchịkọta Semalt na weebụsaịtị. Ga-ahụ ngwaahịa dị iche iche ha ga-enye, karịa maka ụlọ ọrụ nne na nna, akụkọ ihe ịga nke ọma ha na nhọrọ dị iche iche iji kpọtụrụ ha. Have nwere nhọrọ ịbanye ma ọ bụ mepụta akaụntụ na Semalt.net. Mmepụta akaụntụ na-enyere gị aka ịchekwa oru SEO gị na Semalt.
Nchịkọta weebụ gụnyere ịnakọta, ịkọ ma nyochaa data weebụ. Ọ bụ usoro dị mgbagwoju anya na-enyere aka ịchọpụta ma ọ bụrụ na weebụsaịtị na-enweta ebumnuche ya na ebumnuche ọ chọrọ. Site na data nyochara, a na-emepụta usoro ndị ka mma maka ndozi weebụsaịtị. Ngwunye nyocha Semalt bụ ngwaọrụ kachasị ike iji nyere gị aka ịme ndị a na ndị ọzọ.
A na-ekewa ngwaọrụ nyocha Semalt n'ime ngalaba 4.
Na ngalaba a, ị ga-ahụ ngwaọrụ ndị achọrọ maka nyocha zuru oke nke weebụsaịtị gị. Ngalaba SERP nwere mpaghara atọ.
a. Keywords na TOP: N’ebe a, ị ga-ahụ ọnụọgụ nke akara okwu weebụsaịtị gị dị na nsonaazụ nchọta ihe ngbanwe Google TOP 1-100 dị iche na ụbọchị mbụ. Also ga-ahụkwa eserese nke na-egosi ọnụọgụ isi okwu na Google TOP n'oge oge. Site na ngwa a, ị nwere ike inyocha mgbanwe nke ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụokwu nke weebụsaịtị gị nwere na TOP. N'ikpeazụ, ịnwere ike ịlele peeji nke edepụtara weebụsaịtị gị na ọnọdụ ha maka otu isi okwu.
b. Peeji kachasị mma: Ebe a, a ga-enye gị nghọta maka ibe kachasị na-ebute okporo ụzọ. Will ga-ahụ eserese nke na-egosi mgbanwe nke ọnụọgụ weebụsaịtị dị na TOP kemgbe mmalite nke oru gị ruo ụbọchị. Will ga-enwe ike ịmata ọnụọgụ nke ibe weebụ dị na Google TOP 1-100 nsonaazụ nchọta nke ngalaba, na-emegide ụbọchị gara aga. Nwekwara ike ilele ya anya dị ka eserese dị ka ihe na-emegide nchịkọta ọnụọgụ oge niile. E nwere chaatị ọzọ nke anyị ga-agwa gị ka mgbanwe nke ọnụọgụ nke akara isiokwu peeji peeji nke ị họọrọ ahọrọ nọ na TOP site na ụbọchị mmalite nke ibe gị.
c. Asọmpi: Semalt na-enye gị nghọta banyere weebụsaịtị nke ndị asọmpi ị nwere ike ịmụta ihe na ha ma dozie atụmatụ azụmaahịa gị ugbu a. Nke a na - enyere gị aka ịchọta webụsaịtị niile na ogo Google TOP 1-100 maka mkpụrụokwu dị ka nke ndị weebụsaịtị gị. A ga-egosikwa gị ụdị ọnọdụ ebe nrụọrụ weebụ gị dị n'etiti ndị asọmpi gị. A ga-enye gị nghọta maka ọnụọgụ mkpụrụokwu ejikọtara ọnụ maka ndị asọmpi ahọpụtara ahọrọla na TOP. 'Ll ga-ahụkwa tebụl ebe ị ga - ahụ ọnụọgụ mkpụrụokwu ejikọtara na ebe nrụọrụ weebụ gị na ndị asọmpi ọkwá maka Google Google. Site na tebụl a, nsuso ọdịiche nke ọnụọgụ nke mkpụrụedemede ịkekọrịta dịka ọ na-emegide ụbọchị gara aga na-adị mfe.
Ọ dị mkpa ka ị chọpụta ma Google ọ̀ na-ahụ ebe nrụọrụ weebụ gị dị iche ma ọ bụ na ọ bụghị. Onye ọzọ nwere ike dekọtara ọdịnaya websaịtị gị ma ọ bụrụ na edokwasị nke ha n'oge na-adịghị anya karịa nke gị, Google ga-akpado webpage gị ahaziri wee mepụta nke ha bụ isi nke ọdịnaya. Will gha acho inyocha nke a n'ihi Google gharia saịtị ndị nwere ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ buru ibu. N’ebe a, ị ga - achọpụta ma Google were nlekọta websaịtị gị dịka isi mmalite pụrụ iche ma ọ bụ na ọ gaghị. Semalt.net na - enyere gị aka ịlele ọkwa ịpụ iche gị iji nyere gị aka ịma ma ọ bụrụ na ewere weebụsaịtị gị ka ọpụiche ma ọ bụ na ọ bụghị. Akara 0-50% bụ ihe ị chọghị ịnwe - nke a pụtara na Google na-ewere ntanetị weebụ gị. Ego nke 51% -80% pụtara Google na-eche na websaịtị gị bụ idezigharị kachasị mma. Nke a bụ akara dị elu mana Semalt nwere ike inyere gị aka ịme nke ọma. Akara nke 81% -100% bụ ezigbo ngosipụta na ị na-eme ihe ebe a. Google weere ọdịnaya gị dị iche. Nke a na - eme ka ogo gị dị elu.
You gha achọta ngwa ọrụ “ọdịnaya” nke na-enyere gị aka ilele ọdịnaya niile Google na-ahụ na webpage gị. Ọ na-egosikwa akụkụ abụọ nke ọdịnaya websaịtị gị.
Ngwá ọrụ ọzọ ị ga - achọta bụ ngwa "mbụ ọdịnaya ọdịnaya" nke na - ebuli saịtị niile nke Google weere isi mmalite maka ọdịnaya webpage gị. Ọ na - egosi gị otu akụkụ nke ọdịnaya gị ka achọtara na weebụsaịtị ndị ọzọ ka ị nwee ike lelee mpaghara ndị ahụ iji bulie ọkwa pụrụ iche gị. Semalt nwere otu ndị edemede edemede ọkachamara nke nwere ike inyere gị aka ịme ọdịnaya weebụ gị ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Enwere ike ịkpọtụrụ ha na semalt.net.
Mgbe ịbanye na akaụntụ Google gị, ị ga-abanye na ngwa ọrụ webmasters Google. Na ngalaba a, ị ga-ahụ otú weebụsaịtị gị si apụta na nsonaazụ ọchụchọ na Google. Ọ ga - enyere gị aka ịchọpụta isiokwu ndepụtara. Also ga-enwe ike itinye weebụsaịtị gị na webmaps gị dị ka ndepụta zuru ezu ma rịọ ka Google depụta ha.
Also ga-enwerịrị metrik na-atụ aro ịdị irè nke weebụsaịtị gị. Nke a na - enyere aka ịchọpụta ihe ị na - eme ziri ezi yana ihe ndị ahụ na - eme ihe na - ezighi ezi nke na - egbochi saịtị gị ịnọ na Google TOP 1-100.
Ngwá ọrụ saịtị ga-enyere gị aka itinye saịtị websaịtị gị na Google ka ị nwee ike ịmata nke webmaiti edepụtara na ndị nwere njehie.
Ihe nyocha ngwa ngwa peeji bụ ngwaọrụ dị egwu nke na-egosipụta oge ibuo peeji gị, ọnụọgụ nyocha nke ihe ịga nke ọma ị nwere na ọnụọgụ njehie iji dozie. Ngwá ọrụ a na-enye gị akara ngosi maka ma desktọọpụ na nsụgharị mkpanaka nke webpage gị. Thedị ọsọ nke weebụsaịtị gị na-emetụta ogo gị, yabụ na ngwaọrụ a enweghị ọnụ ahịa.
Akara 0-49 na-egosi oke ọsọ ọsọ. Akara nke 50-89 na-egosi ngwangwa ọsọ na-agba ọsọ dị elu nke 90-100 na-egosi ezigbo ọsọ.
Semalt na-enyekwa gị nghọta maka otu ngwa-ngwa-enyi na ebe nrụọrụ weebụ gị dị site na ilatingomi usoro itinye aka na ihe nchọgharị desktọpụ yana ihe nchọgharị ekwentị. Nke a na - enyere gị aka igosipụta otu anyị ga - esi mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị mma maka nkwalite Google SERP.
Mgbe ịbanye na akaụntụ gị, a na-akpọrọ gị gaa dashboard gị ebe ị ga-ahụ nhọrọ iji ihe nzacha iji chọta ọrụ gị chọrọ ma nweta data ugbu a. Nwere ike kekọta ọrụ gị site na ịgbakwunye Mpekere. Also nwekwara nhọrọ iji hazie ọrụ gị site na usoro dịgasị iche iche iji nyochaa ọganihu nke weebụsaịtị gị.
Semalt na-enye ngwaahịa kachasị mma maka njikarịcha SEO gị. Ngwaahịa edepụtara gụnyere:
AutoSEO: Nke a na - enyere gị aka njikarịcha mkpokọta weebụ kachasị mma, na - eme ka ịhụ ụzọ gị na - ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ gị dị, na - enyere aka ịdọta ndị ọbịa ọhụrụ ma mee ka ọnụnọ azụmahịa gị n'ịntanetị dịkwuo elu. Ọrụ AutoSEO Semalt na-enye bụ nke abụọ na-enweghị.
SEO zuru oke: Na SEO zuru ezu, Semalt na-enye gị njikarịcha weebụsaịtị, ezigbo ROI, na-enyere gị aka itinye ego na ọdịnihu gị ma na-enye nsonaazụ ngwa ngwa, nke dị irè ma na-adịte aka. Enwere ike itinye gị n'etiti weebụsaịtị Google TOP 100 mgbe ịmalitere mkpọsa SEO zuru oke nke gị na Semalt.
E-commerce SEO: won't gaghị ahụta mkpọsa SEO dị mma maka ebe nrụọrụ weebụ E-azụmahịa gị karịa Semalt nke E-azụmahịa SEO. Semalt na-arụrụ gị ọrụ - ha na-ebute ndị ahịa n'ezie! Ha na - enyere aka ịkwalite ajụjụ isiokwu gị na - adịghị ala ala iji mee ka ndị ọbịa hụ ọhụụ, ha na - enye gị nyocha nke ọma na naanị ị ga - akwụ ụgwọ maka nsonaazụ.
Nnyocha: Ngwa ọrụ nyocha nke weebụsaịtị Semalt na-enyere gị aka nyochaa ahịa gị, soro ọnọdụ nke ndị asọmpi gị na nke gị ma ha na-ewepụta ozi azụmaahịa zuru oke. Also ga-ahụta ahịa ọhụrụ. Ha na - enyere gị aka ịgbanwe data gị ka ọ bụrụ usoro PDF na EXCEL - ụdị nchekwa ndụ!
SSL: Semalt na-enye nchekwa maka weebụsaịtị gị. Nke a ana achi achi nchedo nke ndi oru gi. Visitors ga - enwetakwu ndị ọbịa si Google na Google Chrome nye gị ahịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Mgbe anyị tụlechara ngwaọrụ na ngwaahịa na Semalt.net, anyị ga-ezute Semalt na ọkwa dị omimi.
N’ebe a, ị ga-ahụ ndị otu ọrụ ọkachamara ha nke ọma ma nweekwa elele ebe ọrụ ha.
Ngwaahịa Semalt mara mma nke ukwuu n'ihi na ha chọrọ azụmahịa gị nke ọma. Enwere atụmatụ maka gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọrụ ha kwa ọnwa, kwa ọnwa 3, ọnwa 6 ma ọ bụ kwa afọ.
Ndị ahịa Semalt nwere obi ụtọ na-ahapụ ngwa ngwa ịhapụ nyocha nke ọnụego mgbanwe dị elu ha nwetala kemgbe ha nyefere azụmahịa ha n'aka nchekwa Semalt.
Akara blog Semalt dị maka onye ọ bụla chọrọ ozi bara uru banyere SEO site na ntọala ruo na akụkọ ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ.
Na etiti enyemaka Semalt, ị nwere ike nweta enyemaka ma ọ bụrụ na ị rapara n'ahụ.
Chọrọ inwetakwu ego? Semalt ekpuchiwo ihe mmemme reseller ha mgbe ịbugharị ọrụ SEO kachasị.
NSOGBU EGO SEMALT
Can nwere ike ịchọpụta ihe karịrị weebụsaịtị 5000 nke nweburu ike nke ọma na Semalt. Don'tcheghi na oge eruola ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị na ndepụta ahụ?
Semalt bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nwere ike ịkpọtụrụ ha na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, email na hotlines ha dịkwa. I nwekwara ike itisa site na adres ha nkịtị ma ọ bụrụ na ị nọ nso.
Otu enweghị ike agọnahụ eziokwu ahụ bụ na Semalt na-enyefe nke ọma na ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa ha site na ọtụtụ ngwaọrụ dị ike ha nyeworo. Semalt bụ n'ezie go-to መፍትሔ maka ihe niile metụtara SEO. Azụmaahịa gị dị n'aka nchebe.